शुरुआती लागि पाठ: एक "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न कसरी
"लेम्बोर्गिनी" सपना कार मानिन्छ छ। यो सीमित मात्रा मा उत्पादित गर्दै छन् जो धेरै महंगा र सुन्दर कार छ। धेरै केटाहरू र मानिसहरू प्रविधी, गाडी सहित फोटो चाहनुहुन्छ। यो चित्र तपाईं आफ्नो कोठा सजाउनु वा एक उपहार कार्ड बनाउन सक्छ। एक "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न कसरी रुचि भएका सबै, यो लेख विवरण पाउन सकिन्छ।
उपकरण र सामाग्री
एक कलाकार जस्तै छ जो कुनै पनि प्रविधी, मा हुन सक्छ कार फोटो। अनुभव चित्रकला धेरै छैन भने, यो पेन्सिल काम सुरु गर्न, र त्यसपछि रूपरेखा रंग अर्थमा बनाउँछ। यस मामला मा, तपाईं काम गर्न आवश्यक हुनेछ:
बाक्लो कागज (एल्बम वा कागज को एक पाना)।
रंगीन पेंसिल, crayons, मार्कर वा रंग लागि रंग।
सफलतापूर्वक रेखाचित्र मास्टर, तपाईं आवश्यक सरल वस्तुहरु र छवि वस्तुहरु सुरु गर्न। स्थायी प्रशिक्षण, हात प्राप्त गर्न साथै अनुपात र दृष्टिकोण मास्टर मद्दत गर्छ। अन्त मा, एक "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न, कठिनाइको कारण छैन।
सुन्दर कार चित्रण गर्न, विस्तार मा मनपर्ने मोडेल को आकार र संरचना छलफल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कसरी "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न सोचिरहनुभएको, यो गोलाकार र सुव्यवस्थित शरीर उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तो गर्भवती र पूर्णता ल्याइएको Bumpers, हेडलाइट्स, ढोका ह्यान्डलहरू र अरूलाई रूपमा पनि सानो विवरण। यो मिसिन आफ्नो तरिका को एक आफ्नो मालिक को सुरुचिपूर्ण जीवन पुष्टि गर्छ छ।
कारहरुको को रूपमा "तीन-चौथाई", जहाँ देखिने र अगाडि हुड र पक्ष मा सबै भन्दा राम्रो हेर्न। तपाईं एक कार सर्किट सिर्जना गर्दा राम्रो चरण पुस्तिका द्वारा चरण केन्द्रित छ। चरणमा एक "लेम्बोर्गिनी" कसरी आकर्षित गर्न विशेष विचार गर्नुहोस्:
मुख्यतया एक लम्बी गोलो resembling वाहन बाहिरी आकृति कोरिएको।
दुई पाङ्ग्रा थपियो। विस्तृत टायर र ड्राइभ - व्हील को आकृति तीन सर्कल हुन्छन्।
अगाडि हुड र गाडीको अगाडीको शिशा मा आएको।
आधारभूत र अतिरिक्त हेडलाइट्स र अगाडि बम्पर रूपरेखा।
छेउमा विन्डो, पछाडिको दृश्य दर्पण र सम्पूर्ण शरीर साथ एक सीमा थपिएको छ।
को पाङ्ग्रा र पक्ष विन्डो विवरण प्रदर्शन। अगाडि पनि "लेम्बोर्गिनी" को विशिष्ट प्रतीक आकर्षित गर्न आवश्यक छ। यो चरण मा यो पूरा सर्किट छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि, आवश्यक भने, रेखाचित्र powdering पारित गर्न सक्नुहुन्छ। , रातो हरियो वा पहेलो - यी कार उज्ज्वल रंग मा आउनुहोस्।
को पूरक ढाँचा?
एक "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न, समाधान भएपछि, यो काम विवरण पूरक गर्न अर्थमा बनाउँछ। कलाकार चित्र पोस्टकार्ड देखि गर्न योजना छ भने, हामी अभिवादन लेख्न सक्नुहुन्छ वा हुड धनुष को शीर्ष मा समाप्त गर्न। पृष्ठभूमिमा तपाईं सडक, शहर, प्रकृति, मान्छे, कार, वा अन्य शानदार परिदृश्य आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
यो लेख पढ्ने पछि, एक कार, "लेम्बोर्गिनी" आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न, गाह्रो हुँदैन। सफल काम मा हस्ताक्षर र मिति गर्न सक्नुहुन्छ।
विमान मा तथ्याङ्कले देखाउँदै (परिभाषा)
1941-1945 को युद्ध बारेमा सबै भन्दा राम्रो फिल्म।
9 महिनामा बच्चाको निद्रा: मानदण्डहरू, सम्भावित समस्याहरू
बच्चाहरु र वयस्क लागि - नाक rinsing लागि नुनखरा समाधान
Argon रूपमा पकाउन? प्रक्रिया र पुस्तिका को विवरण
उडान आकाश लालटेन इच्छा - जब तारा रोशनी छन्!
कार शेवरलेट एक्सप्रेस को अवलोकन
Valeriy Fedorovich Bykovsky। Cosmonaut। काम, लगनशील भई लागिरहेमा र भाग्य